जान्नुहोस् ! यी चार महिनामा जन्मिने महिलामा हुन्छ लक्ष्मीको रुप – ताजा समाचार
जान्नुहोस् ! यी चार महिनामा जन्मिने महिलामा हुन्छ लक्ष्मीको रुप
फेब्रुअरी महिना :
यो महिनामा जन्मिने महिलाहरु निकै बुद्धिमानी हुने गर्छन् । ग्रह चालको कारण यो महिनामा जन्मिने महिलाहरु विवाहपछि पनि भाग्य निकै चम्कन्छ । त्यसकारण फेब्रुअरी महिनामा जन्मने महिलालाई लक्ष्मीको रुपमा लिने गरिन्छ ।
र यो पनि पढ्नुहोस् : कुन महिनामा जन्मेका केटीमान्छेको स्वभाव कस्तो ? थाहा पाउनुहोस्
अप्रिल महिना :
यो महिनामा जन्मिने महिलाहरु छिट्टै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्ने गर्छन् । सधै भाग्यले साथ दिने भएकाले उनीहरु प्रगतिको पथमा हुने गर्छन् । विवापछि पनि उनीहरुको कारण पतिलाई शुभ नै शुभ हुनेछ ।
जुन महिना :
जुन महिनामा जन्मेका महिलालाई शास्त्रले खासै राम्रो नमानेपनि उनीहरुलाई भाग्यले सधै साथ दिएको हुन्छ । उनीहरु जुझारु र कर्मठ हुने भएकाले मेहनतलाई खेर जान दिँदैनन् । त्यसकारण यो महिनामा जन्मिने महिलालाई भाग्यले सधै साथ दिन्छ ।
सेप्टेम्बर महिना :
यो महिनामा जन्मने महिलाहरु मेहनत नगरेपनि सजिलै सफलता पाउन सक्छन् । उनीहरुले विवाहको लागि पनि धनि केटा भेट्छन् ।
र यो पनि पढ्नुहोस् : कुन महिलाको स्वभाव कस्तो ? नामबाटै यसरी थाहा पाउनुस् !